Aoka aloha tsy hisy hanao fanambarana mandra-pa… hoy Zafilahy. – MyDago.com aime Madagascar
Aoka aloha tsy hisy hanao fanambarana mandra-pa… hoy Zafilahy.
Na dia kabary an-kianja aza isika manaraka arofenitra hatrany “protocole” satria ny ara-dalana no itolomana hoy I Mektoub .
Efa nifandaminana foana ny fidiran’ny Frantsay teto hatramin’ny andron’ny mpanjaka, i Rainilaiarivony no namela tamin’izany ary izao dia misy mbola taranany hoy I Mektoub dia i Ratsirahonana sy i Andriamanjato, izay tena tian’ny frantsay. Ny ekipa iray sady miseho dia i Andry sy Vital, ireo tsy misy tsy mahalala fa Frantsay an-taratasy ary ny iray aza vao nilaza fa tsy miala eto aho raha tsy misy rà mandrika. Manana namana maro ireo. Ny olan’ireo amintsika mantsy dia tsy mety korontanina isika ka dia andefasana olona ato mihitsy mba hikitikitika antsika. Ny “francophone” mitetika hampiady ny malagasy ary ny “anglophone” indray no mampilamina. Tolo-kevitra no hatao hoy Mektoub : aoka ny fomba nanavoan’ny Sadc ny tondrozotra ihany no andraisana azy hoy ity solombavam-bahoakan’i Manakarateo aloha ity.
Mbola tsy nisy niteny teto hoe nisaraka na mandeha irery amin’izay ny ankolafy tsirairay ao amin’ny ankolafy telo ary mazava ny tenin’i Ravalomanana fa izay mivorivory etsy sy eroa aza miteny amin’ny alalan’ny movansy fa amin’ny anaranao irery, hoy hatrany ny fanazavany.
Tamin’ny anjara fitenenan’I deptioté Zafilahy, tetsy amin’ny kianjan’ny Magro ihany koa no nilazany fa ny tombontsoan’ny vahoaka no jerena fa tsy ny tombontsoan’ny mpanao politika. Mahitsy i Ravalomanana ka be no tsy tia izany, hoy izy.Maro anefa ireo naira-dia no tsy nahazaka izany . Rehefa niainga ny firenena dia nampiasa ny frantsay an-taratasy ka tanteraka ihany ny farany ilay fanozokozonina tamin’ny 2009. Ny tsy fantany anefa dia efa natokan’i Ravalomanana ho an’I Madagasikara ny ainy hanasoa azy na dia afaka mandraharaha tsara aza izy any ivelany, hoy hatrany Zafilahy. Betsaka ny mivorivory dia miteny fa hatsanganay alohan’ny 05 Oktobra 2011 ny tetezamita tsy miandry na iza na iza. Niombon’antoka anefa ny vahoaka sy ny Troïka ary manaraka ny ankolafy telo.
Aoka tsy hanao fanambarana manokana amin’ny alalan’ny ankolafy hoy ny fanambaran’ity solombavambahoaka voafidy tany Vavantenina ity. Ianao mpanongam-panjakana io indray ve no handa sy tambatambazana ? hoy izy.
Hanao fanambarana lehibe i Pr Zafy Albert rahampitso !
Pretoria II, hanao inona ?
AOKA IZAY NY PETATOKO VITA GASY !
Auteur Solo Razafy*Publié le 3 octobre 2011 3 octobre 2011 Catégories Politique
2 réflexions sur « Aoka aloha tsy hisy hanao fanambarana mandra-pa… hoy Zafilahy. »
4 octobre 2011 à 12 h 05 min
Hamafiso mafy fa » IZY NO NAHATONGA IZAO FAHAVOAZANA IZAO »
Tsy saritsary izany io fiantsoana ho any aminy io fa AO ILAY ZAVATRA!!!
Nateraka Rainilainga ireny dia lehibe t@ lainga dia izao MAMPANJAKA ny lainga izao,koa tsy mahagaga,
dia ny mpanara-dia azy koa MPANDAINGA mazava ho azy.
Avelao ho lasa adala eo fa ISIKA TSY MIEMOTRA INTSONY!na hapiaka-peo izy,na hikopaka ny hangoro-vitsika
tsy manitsy mandresy ny tolona!!!!!
Izy efa domelina mbola miampy ireo manodidina azy koa inona intsony no HANDRASANA @ olona toy izany?????
4 octobre 2011 à 16 h 06 min
Sage decision que de ne rien annoncer avant que l’on sache EXACTEMENT la date de la venue du President.
Cela a 2 titres : – Pour ceux qui sont directement aux alentours du President M.Ravalomanana et
– Pour le peuple qui brule de le revoir
Par contre, annonce doit imperativement faite, avec GRAND TAPAGE MEDIATIQUE, pour que le maximum de gens vienne à sa rencontre.
Précédent Article précédent : La charrue avant les bœufs, à quels « saints » se vouer ?
Suivant Article suivant : Affaire tourmaline: des membres du CST impliqués